Siyaasadda qaxootiga ee xisbiga Mp - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Maria Wetterstrand, Peter Ericsson, labada afhayeen ee xisbiga cimilada.
Siyaasadda qaxootiga ee xisbiga Mp
La daabacay måndag 17 maj 2010 kl 11.11
Xisbiga Deegaanka ee Miljö partiet, ayaa soo jeediyay in muddada lagu jiro afarta sannadood ee foodda innagu soo haysa loo fidiyo cafis guud dhammaan soo galootiga dalka ku sugan ee dhuumaaleeysiga ku jira. haddii uu xisbigaasi iyo kuwa ay xulufada yihiin ku guuleeystaan doorashada foodda innagu soo heeysa ee sannadkan 2010, sida uu go’aan xisbigu ku gaaray shirweeynihii xubnaha xisbigaasi ee toddobaadkii ina dhaafay aakhirkiisii ku yeeshay magaalada Uppsala ee wadankan Sweden.
Haddii uu xisbigaasi iyo kuwa ay xulufada yihiin ku guuleeystaan doorashada foodda innagu soo heeysa ee sannadkan 2010, waxey ku caddeeyd go’aan xisbigu ku gaaray shirweeynihii xubnihiisa ee toddobaadkii ina dhaafay aakhirkiisii ugu qabsoomay magaalada Uppsala. Cafis guud oo loo fidiyo dhammaan soo galootiga dhuumaaleeysiga ku jira ayey xubnaha shirweeynaha ka soo qeeybgalay ey kaga soo horjeesteen middii uu watay hoggaanka xisbigu, hase yeeshee iminka lagu qoray bayaanka doorashada ee xisbiga. Maria Wetterstrand, kana mid ah labada afhayeen ee xisbiga cimilada Mp, ayaa iyadu sheegtay in ammuurtaasi tahay mid adag sidii loo hirgelin lahaa haddii uu xisbigiisu ka mid noqdo xisbiyada talada haya doorashada kadib. Iyadoona hogaamiyaha xisbiga Socialdemokrat-ka Mona Sahlin ee ay xulufada yihinna, mar ay booqasho ku tagtay shirweeynaha xisbiga cimilada sheegtay in aanay taabacsanayn.
- Haddii aan si khafiif ah u iraahdo, aad iyo aad ayaanu ii qancin fikirka la xiriira in cafis guud loo fidiyo soo galootiga dhuumaaleeysiga ku sugan.
Bayaanka doorashada ee uu hoggaanka cimiladu horkeenay shirweenaha xisbiga ee ka dhacay qolka weeyn ee riwaayadaha ee magaalada Uppsala ayaanu ka muuqan cafis guud ee loo fidiyo soo galootiga, hase yeeshee ey ka gilgisheen xubno ka mid ah ka qeeybgalayaashii shirweeynaha. Xubnahaa waxaa ka mid ahayd, Sara Thyringer oo matalaysay xubnaha xisbiga cimilada ee magaalada Göteborg.
- waa dhinac sawirka muuqaalka su’aalaha ee xisbiga cimilada ee lagu bayaaninayo in xisbigan uu aad iyo aad siyaasaddiisu uga fogtahay xagjir-nimada. Waxay kaloo middaasi carrabka ku adkeeyneeysaa aragtidayada la xiriirta bani’aadanka iyo indhaha aan ku eegno caalamka aan ku dhaqannahay.